Indha-indheynta Toner | ASC toner
Tayada guud ee nooc ka mid ah toner-ka ayaa lagu go'aamiyaa lixda arrimood ee soo socda: madow, dambas-hoosaadka, hagaajinta, xallinta, qadarka toner, iyo ghosting. Arimahan ayaa midba midka kale la xiriira oo midba midka kale saameyn ayuu ku leeyahay. Sababaha saameynta arrimahan ayaa lagu sharxay hoosta.
1. Madow: Xisaabinta qiimaha mugdigu waa in tijaabada mugdiga madow uu marka hore soo baxo tiro gaar ah oo laalaabyo ah, oo ku dhufo shaxanka la cabbirayo, ka dibna dib uga milicsado tijaabada mugdiga madow, xisaabiya laambadda iftiinka nuugo, ka dibna gudbiyaa go'an Qiimaha uu xisaabiyo barnaamijka. Marka ay sare u kacdo qiimaha mugdiga madow ee toner ayaa ah, sida ugu wanaagsan ee saameynta daabacaadu u sii fiicantahay. Heerka qiimaha madow ee caalamiga ah (OEM asalka ah) waa 1.3. Si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee warshadaha kala duwan, celceliska qiimaha madoow ee toner shirkadda guud ahaan waxaa lagu xakameynayaa qiyaastii 1.4.
2. Dambas hoosta: Dambas hoosta ayaa ah in la tijaabiyo qiimaha madoow ee booska banaan ee muunadda la daabacay iyada oo aan lahayn tijaabad madow. Xaaladaha caadiga ah, qiimaha hoose ee ashka asalka ah ee OEM toner waa 0.001-0.03, marka ay ka weyn tahay 0.006, natiijada baaritaanka muuqaalka wuxuu dareemayaa in saamiga daabacan uu waxoogaa wasakh yahay. Waxyaabaha ugu waaweyn ee saamaynaya qiimaha hoose ee dambaska ashyaa waa qalabka korantada iyo magnetic ee toner. Nooc kasta oo daabacan ah waxay u baahan tahay in astaamaha elektromagnetic-ka ee toner guud ahaan ay kala duwan yihiin. Tani sidoo kale waa sababta aan u xoojinno budada gaarka ah. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay daabacaadaha ama kartoonnada 'toner' ayaa sidoo kale sababi kara dambaska hoose. Dambasyada hoose ee ASC toner waxaa lagu xakameeyay 0.005.
3 Hagaajinta soonka: hagaajinta soonka waxaa loola jeedaa awooda toon ku lifaaqan dusha warqaddu inay dhalaasho oo gasho fiberka. Tayada resinku waa cunsur weyn oo saameyn ku leh adkaynta hagaajinta toner.
4. Go'aan: Go'aanku wuxuu la mid yahay dhibcaha (DPI) ee lagu dhejin karo hal inji. Dhumucda walxaha toner ayaa si toos ah u saameyn doona qaraarka. Waqtiga xaadirka, xalka toner inta badan waa 300DPI, 600DPI, 1200DPI.
5. Heerka qashinka toner: Heerka toner qashinka waxaa loola jeedaa saamiga toner qashinka soo saaray tiro cayiman oo toner daabacaadda caadiga ah. Xaddiga qashinka toner wuxuu si toos ah u saameeyaa tirada go'yada oo lagu daabacay cadad gaar ah. Heerka wuxuu u baahan yahay in heerka qashinka toner ee toner uu ka yaraado 10%.
6. Waxa jira laba nooc oo camal fal jilicsan leh: cirfiil wanaagsan iyo cirfiid xun. Sawirka cirfiidka wanaagsan waa muuqaalka cirfiidka ee aan badanaa dhahno, taasi waa, isla qoraalkii (ama qaabkii) wuxuu si toos ah uga muuqdaa qoraalka (ama qaab kale) (jihada waraaqaha), laakiin qiimaha cufnaanta (madow) waa mid aad uga hooseeya kan. . Guud ahaan waxaa la sameeyay inta lagu gudajiray howsha hagaajinta ama habka wareejinta.